Fonja kobam-bolo vita amin'ny fivarotana Premium 10x15ft (3 × 4.5m) tranolay sy trano maitso | Winsom
$ 49.00 $ 47,00 $ 45,00
2) lamba oxford avo lenta miaraka amina coating PVC ary fiarovana 100% ary fiarovana UV
3) Mora ny napetraka 2 olona manaraka ny manual manual
Tranon'ny lay kanopiana 10x15ft (3x4.5m)
Fitaovana amin'ny serivisy
Ny mombamomba ny tongotra-32x32 / 25x25mm trusstube-13x26mm
Mety amin'ny karazana fiasa ivelany any ivelany, toy ny seho, fety, BBQ, fety, fampiasana varotra sy ny sisa. Ampiasaina amin'ny andro mafana sy amin'ny orana izy io. Ity kintana pop-up 10 x 10 FT ity dia manome alokaloka ampy hamenoana ny filanao isan'andro.
Io pavillon pop-up eo noho eo io dia vita amin'ny vy matevina vita amin'ny vy vita amin'ny vovony izay porofo, matevina ary miorim-paka; ny fehin-trano-tampon-tampony dia manampy fitoniana.
Ny fananganana plastika nylon sy ny kiraro dia manome hetsika malefaka ho an'ny fanamorana mora kokoa ary hihena.
Ny tranolain'i Pop up canopy dia mora avoaka ary averina. Ny amboara ity tranolay ity dia mora be tokoa raha olona 2 no afaka hanangana manaraka ny torolalana! Ary ny canopy 10x10 mipoapoaka dia maivana ary mafy, misy andilany be dia be.
Ampiasaina mba hampivoarana ny vy vy mba hampivoatra azy sy mateza kokoa.
Previous: 40mm Profil mavesatra matevina Modely matevina vita amin'ny takelaka Gazebo samy hafa samy hafa
Manaraka: Mavesatra ny adidy any ivelany ho an'ny hetsika fampakaram-bady 5x8m